Dowladda Soomaaliya oo loogu baaqay inay wada hadal la furto Al-Shabaab
Sagal Radio Services • News Report • July 16, 2018
Wasiirkii hore ee Amniga dowladdii Madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh C/risaaq Cumar Maxamed ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka inay wada hadal la furto Al-Shabaab, isagoo xusay in Shabaab aan kaliya dagaal lagu jebin karin.
Sagal Radio Services • News Report • July 11, 2018
Al-Shabaab oo baahisay magaca mid ka mid ah raggii fuliyay qaraxyadii Muqdisho.
Sagal Radio Services • News Report • February 26, 2018
Al-Shabaab ayaa baahisay magaca mid ka mid ah raggii ku lugta lahaa weeraradii maalintii jimcihii la soo dhaafay lagu qaaday agagaarka Madaxtooyada iyo Hotelka Doorbin oo ku dhow Xarunta Dhexe ee Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka.
Alshabaab oo afar ruux oo ku diley deegaanka Lamu ee dalka Kenya
Wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in afar ruux oo u dhashay dalka Kenya lagu diley deegaanka Lamu iyadoo dilkaana lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen ururka Alshabaab.
Ururka Alshabaab oo isaga baxaya deegaano ka mid ah gobolka Sh/hoose
Sagal Radio Services • News Report • May 7, 2017
Wararka ka imanaya gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in ciidamada ururka Alshabaab ay bilaabeen inay ka baxaan deegaano ku yaal gobolka Sh/hoose gaar ahaan deegaanada ku yaal xeebta Badweynta Hindiya.
La-tuhunsaneyaal laga shakiyay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin oo Muqdisho lagu xiray
Ilaa 20 qof oo ah la-tuhunsaneyaal laga shakiyay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin ayaa waxaa ciidamada ammaanku ku xireen Muqdisho habeynkii Axadu soo galaysay.
Guddoomiyihii Al-Shabaab u qaabilsanaa Aw-dheegle oo la dilay
Taliska AMISOM ayaa sheegay in howl gal ay si wada jir u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku dileen Guddoomiyihii Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanka Aw-dheegle ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Al-Shabaab oo la sheegay inay bur buriyeen Anteeno Isgaarsiineed ku taal gudaha Kenya
Sagal Radio Services • News Report • June 25, 2016
Warbaahinta Kenya ayaa sheegtay in dagaalyahano looga shakisan yahay Al-Shabaab ay bur buriyeen Anteeno Isgaarsiin ku taal deegaan lagu magacaabo Dhamase oo ka tirsan Kenya, kuna dhow xuduuda Soomaaliya.
Al-Shabaab oo xilkii ka qaaday wakiilkii u qaabilsanaa Shabeellaha Hoose
Kooxda Al-Shabaab ayaa xilka ka qaaday Guddoomiyihii u qaabilsanaa Gobolka Shabeellaha Hoose oo lagu magacaabayay Maxamed Abuu Cabdalla.
Labo sarkaal oo ka tirsan Ciidamada Booliska Kenya oo lagu diley Kenya
Wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in ugu yaraan labo askari oo ka tirsan ciidamada Booliska dalka Kenya lagu diley meel u dhexeysa Mandhere iyo Ceel-Waaq.
Sirdoonka Soomaaliya oo gacanta ku haya Soomaali Mareykan ka tirsanaa Al-Shabaab
Sirdoonka Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay inay gacanta ku hayaan wiil Soomaali Mareykan ahaa oo muddo todobo sano ka hor ku biiray Al-Shabaab, kana yimid Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Alshabaab oo weeraray degmada Qoryooley gobolka Sh/hoose
Wararka ka imanaya degmada Qoryooley ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in uu dagaal ku dhex maray degmada Qoryooley ciidamo ka tirsan dowlada iyo dagaalyahano ka tirsan ururka Alshabaab.
Daawo Sawirada “Al-Shabaab oo soo bandhigtay Meydadka AMISOM iyo qaabkii uu u dhacay Weerarkii Janaale
Xarakada Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay sawiro ay kasoo qaadeyn qaabkii uu u dhacay weerarkii dhawaan ku qaadeen xero ay Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda uga sugnaayeen Deegaanka Janaale ee Gobolka Sh/Hoose.
Al-Shabaab oo sii deysay labo askari Kenyan ah oo labo sano ka hor soo qafaasheen
Al-Shabab ayaa sheegtay inay sii daayeen labo askari Kenyan ah, kadib markii ay qaateen Diinta Islaamka.
Ardayda Jaamacadaha Kenya oo lagu eedeeyay in ay lacag ka qaataan ururka Alshabaab
Agaasimaha xarunta ka hortagga argagaxisada dalka Kenya Isaac Ochieng ayaa ku eedeeyay ardayda waxbarashada sare dalka Kenya inay ku biirayaan ururada argagaxisada.
Al-Shabaab oo werear culus ku qaaday saldhig Ciidamada AMISOM ku leeyihiin Leego
Al-Shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday saaka waabarigii deegaanka Leego, gaar ahaan saldhig ay degan yihiin Ciidamada AMISOM.
Al-Shabaab oo Odayaal ka qeyb geli lahaa shirka Cadaado ku xirtay Xarardheere
Sagal Radio Services • News Report • April 17, 2015
Wararka ka imaanaya degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay xir xireen odayaal dhaqameedyo ka mid ahaa ergooyinka ka qeyb galayay shirka maamul u sameynta Gobollada Dhexe ee ka furmay Cadaado.
Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo lagu bartilmaameedsaday duqeyn ka dhacday Gobolka Gedo
Wararka ka imaanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in diyaarad kuwa aan duuliyaha laheyn ay bartilmaameedsatay baabuur uu la socday Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo fagaare ku yaal degmada Diinsoor ku toogtay nin lagu eedeeyay inuu Sixiroole ahaa
Sagal Radio Services • News Report • February 28, 2015
Al-Shabaab ayaa shalay galab fagaare ku yaal degmada Diinsoor ee Gobolka Baay ku dilay nin lagu eedeeyay inuu ahaa Sixiroole, kaasoo ay qabteen ciidamada loo yaqaano Xisbada ee u howl gala sida Booliska oo kale.
Al-shabaab oo weerartay saldhigyo ay leeyihiin ciidanka dowladda & AMISOM
Xoogag taabacsan Al-shabaab ayaa xalay weerarro ku dhufo-oo-ka-dhaqaaq ah ku qaadday saldhigyo ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ku leeyihiin duleedka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose.
Madaxii Sirdoonka Shabaab oo bixiyay Xog lagu qaban karo Samatha Lewthwaite
Wargayska The Mirror ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa qoray asagoo soo xiganaya saraakiil sirdoon in dawlada Britain ay diyaarinayso ciidamo gaar ah oo nolosha ku qabta haweeneyda sida weyn loo doon doonayo ee Ingiriiska u dhalatay ee la yiraahdo Samantha Lewthwaite ayadoo la tixraacayo xog uu bixiyay Zakariye Ismaciil Xirsi oo dhawaan Muqdisho kaga dhawaaqay inuu Al-Shabab iskaga baxay.
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inuu isku soo dhiibay Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Sarkaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan Gobolka Gedo, iyadoo laamaha ammaanka dowladda ee fadhigooda yahay Muqdisho lagu soo wareejin doono.
Taliyihii ururka Alshabaab ee degmada Kuntuwaarey oo la diley
Sagal Radio Services • News Report • January 2, 2015
Wararka ka imanaya gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in iska horimaad hubeysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan degmada Kuntuwaarey lagu diley taliyihii ciidamada Alshabaab ee degmada Kuntuwaarey.
Al-Shabaab oo sheegay in Zakariye Ismaaciil uu muddo labo sano ka hor ka goostay
Sagal Radio Services • News Report • December 28, 2014
Al-Shabaab ayaa ka hadashay is dhiibidii Sarkaalkii ka tirsanaa oo lagu magacaabayay Zakariye Ismaaciil Xirsi, kana mid ahaa 7-dii Hogaamiye ee horay Mareykanka madaxooda lacago malaayiin doollar ah u dul dhigay.
Zakariye Ismaaciil oo ka mid ahaa raggii Mareykanka uu madaxooda lacago dul dhigay oo isku dhiibay dowladda Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • December 27, 2014
Mid ka mid ah Hogaamiyeyaashii Al-Shabaab ee horay madaxooda malaayiin doolar uu dul dhigay Mareykanka Zakariye Ismaaciil Axmed Xirsi ayaa isku soo dhiibay Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan Gobolka Gedo.
Al-Shabaab oo xalay weeraray fariisimo ciidamada dowladda ku lahaayeen deegaanka Raage Ceelle
Sagal Radio Services • News Report • December 14, 2014
Wararka ka imaanaya deegaanka Raage Ceelle ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen fariisimo ay ciidanka milateriga deegaankaas ku lahaayeen.
Al-Shabaab oo markale weerar ka geystay Gudaha Kenya
Sagal Radio Services • News Report • December 13, 2014
Askari ka tirsan ciidamada Booliska ayaa la dilay labo kalana dhaawacyo ayaa soo gaaray, kadib markii kooxo hubeysan ay rasaas ku fureen xili ay ku sugnaayeen deegaanka Kilifi ee dhanka xeebta dalka Kenya.
Al-Shabaab oo sheegay inay la wareegeen deegaanka Gadoon-Dhawe oo ku dhow xuduuda Kenya
Al-Shabaab ayaa sheegay inay dagaal kula wareegeen deegaanka Gadoon-Dhawe oo ka tirsan degmada Beledxaawo ee Gobolka Gedo, halkaasoo ciidamada Kenya ay todobaadkii la soo dhaafay weerar ku qaadeen, ciidamo fara badana ay geeyeen.
Al-Shabaab oo sheegatay weerarkii dadka badan lagu dilay ee saarnaa Baskii ka baxay Mandhera
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyada weerarkii dadka badan ku dhinteen oo saakay waabarigii hore ka dhacay duleedka magaalada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya, markii dabley hubeysan ay leexsadeen Gaari bas ahaa oo ay saarnaayeen dad rakaab ahaa.
Al-shabaab oo sheegtay inay madafiic culus ku Weerartay Madaxtooyada Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • November 17, 2014
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay inay fiidnimadii caawa madaafiic ku weerartay madaxtooyada Somalia, balse afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay inaysan jirin wax madaafiic oo kusoo dhacday gudaha madaxtooyada.
Al-shabaab oo dhakhaatiir ku Afduubay meel ku dhow degmada Balad-Xaawo
Sagal Radio Services • News Report • November 8, 2014
Kooxo taabacsan Xarakada Al-shabaab ayaa maanta ka afduubtay deegaanka Cas-caseey oo ku dhow degmada Balad-xaawo ee gobolka Gedo shan ruux oo saddex ka mid ah ay ahaayeen dhakhaatiir.
Jubbada Hoose: Al-shabaab oo lagala Wareegay Deegaan Muhiim ah
Sagal Radio Services • News Report • October 24, 2014
Cabdinaasir Seeraar Maax ayaa sheegay inay saddex qof oo Al-Shabaab ahaa ku dileen dagaal ay saakay kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Biroole oo 50 km dhinaca galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose.
Rag la sheegay in ay Shabaab yihiin oo Doolow lagu qabtay
Sagal Radio Services • News Report • October 22, 2014
Degmada Dooloow ee gobolka Gado ayaa lagu qabtay Afar qof oo la rumeeysanyahay inay qorshaynayeen qaraxyo ay la beegsanayaan mas’uuliyiin iyo goobo muhiim ah oo ku yaalla degmadaas.
Al-shabaab oo sheegay in ay Dhagax ku dileen Wiil Dhalinyaro ah
Dhaqdhaqaaqa Al-shabaab ayaa sheegay in qeyb ka mid ah Gobolka Shabellaha Hoose ay Dhagax ku dileen Wiil Dhalinyaro ah oo Dadiisa ay ku sheegeen 18-jir islamarkaana ay ku Eedeeyeen in uu Kufsaday Haweeneey kamid aheyd Dadka Gobolka Kunool.
Al-shabaab oo beenisay war ay baahiyeen dowladaha Maraykanka iyo Uganda
Ururka Al-shabaab ayaa beeniyay war ka so yeeray dowladda Uganda oo la xiriiray in ciidamada dowladdaas ay fashiliyeen weerar qorshaysan oo ay Al-shabaab soo abaabushay ,kaasi oo la sheegay in lala damacsnaaa magaalada Kampala.
Dilkii Axmed Godane ka dib inta badan Madaxda Al Shabaab oo ilaaladii qaaska u ahaa iska badalay (Top News) .
Sagal Radio Services • News Report • September 11, 2014
Waa kuma Hogaamiyaha Cusub ee Al-shabaab maxadse kala socotaa Taariikhdiisa.
Hogaamiyahan cusub ee Alshabab Ahmed Omar Abucubeyd waxa uu kudhashay magaalada Qalaafe oo katirsan gobolada maamulka soomaalida ee bariga ethipia sanadkii 1970 waxaa kusoo barbaaray kuna soo qaatay waqtigiisa qeyb kamid ah isla magaalada uu kudhashay ee qalaafe.
Al-Shabaab oo iskaga baxay qeybo ka mid ah Galgaduud
Wararka laga helayo Deegaano hoosyimaada Degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Al-shabaab ay iskaga baxeen halkaasi ka dib markii Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay Culeys saareen.
Al-shabaab oo sheegtay inay beegsanayso diyaaradaha sahayda u sida AMISOM
Sagal Radio Services • News Report • July 29, 2014
Xarakada Al-shabaab ayaa ku gooddisay in ay beegsan doonto diyaaradaha sahayda u sida ciidamada AMISOM ee ku sugan gobollada Somalia.
Alshabaab oo jabsaday Twitterka Taliska Ciiddanka Difaaca Kenya iyo warar Jihaad khuseeya oo lagu soo daabacay
Dagaalka u dhexeeya Alshabaab iyo Milliteriga Kenya ayaa u muuqda inuu u xuubsiibsanayo dhinaca Warbaahinta, kadib, markii la shaaciyey in Kooxaha Burcadda Internedka inay jabsadeen Cinwaanka uu Afhayeenka Taliska Guud ee Ciiddanka Kenya, Major Emmanuel Chirchir ku lahaa Twitterka.
Faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaayo Dagaal ka dhacay Magaalada Baydhabo iyo Khasaaro la sheegay
Sagal Radio Services • News Report • July 20, 2014
Warar dheeraad ah oo kasoo baxaayo Weerar ay Kooxda Al-shabaab Habeenimadii xalay ku qaaday Magaalada Baydhabo, ayaa sheegaya inay ku dhinteen in kabadan 7-Ruux oo isugi jiray Ciidamada Dowlada,Alshabaab iyo dad shacab ah.
Al-shabaab oo sheegatay Mas’uuliyadda dil iyo dhaawac loo geystay Xildhibaanno
Sagal Radio Services • News Report • July 3, 2014
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay inay mas’uul ka tahay dilkii xildhibaan Maxamed Maxamuud Xeyd loogu geystay maanta Xamar-weyne oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
Al-shabaab oo Ganacsato ku Dilay Gobolka Galgaduud
Sagal Radio Services • News Report • July 2, 2014
Wararka ka imaanaya Degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Al-shabaab Gaari Qaad siday halkaa ay ku Gubeen islamarkaana ay Dileen Labo ka mid ah Dadkii Gaariga Saarnaa.
Al-shabaab oo ka hadlay Duqeeyntii lagu Qaaday Jasiirada Gudhaa
Afhayeenka Al-shabaab ee Dhanka Dagaalka u qaabilsan Cabdi Casiis Abuu Muscab oo la hadlay Wakaalada Wararka ee AFP ayaa sheegay in Ciidamada Al-shabaab iyo kuwa Kenya ay ku dagaalameen Jasiirada Gudhaa iyo Caanoole ee Gobolka Jubbada Hoose.
Al-shabaab oo Muslimiinta Kenya ugu baaqday inay ka qaybgalaan dagaallada
Al-shabaab ayaa ugu baaqday muslimiinta ku nool dalka Kenya inay ka qaybgalaan dagaallada looga horjeedo xukuumadda dalkaas ee ay billaabeen, iyagoo sheegay in dunida oo dhan ay ka socdaan dagaallo muslimka iyo gaalada u dhexeeya.
Al-shabaab oo sheegtay inay isku soo dhiibeen Askar ka goostay Dowladda
Xarakada Al-shabaab ayaa shaacisay in ciidammo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay isku soo dhiibeen, kuwo kalen oo badanna ay ku jiraan duurarka, kuwaasoo ay u direen odayaan si ay u keenaan magaalooyinka aan ka talino.
Al-Shabaab oo ka hadashay sababta ka dambeysa Dagaalka kasoo cusboonaaday Gobolka Shabeelaha Hoose
Sagal Radio Services • News Report • June 6, 2014
Xarakada Al-Shabaab ayaa ka hadashay dagaal beeleed kasoo cusboonaaday Degmooyin iyo Deegaano katirsan Gobolka Shabeelaha Hoose kaa oo u dhaxeeya labo beel oo walaalaha oo Gobolkaasi wada daga.
Al-Shabaab oo rag ay ku eedeysay Basaasnimo ku toogatay Buulo-Mareer
Sagal Radio Services • News Report • May 30, 2014
Maxkamadda Al-shabaab ee degmada Buulo-mareer ayaa xukun dil ah ku fulisay saddex qof oo la sheegay inay jaajuusiin u ahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM.
Al Shabaab oo ku dilay Gobolka Bay mid ka mid ah Ajaanib ka bar bar dagaalameysay
Sagal Radio Services • News Report • May 23, 2014
Wararka aan ka helayno Degmada Buur hakaba ee Gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in Ciidan katirsan Al Shabaab ay halkaasi ku dileen mid ka mid ah Ajaanibta ka bar bar dagaalameysay iyagoona dilka Sargaalkaasi u adeegsaday Tooreey qoortana ka jaray.
Sargaal sare oo katirsanaa Al-Shabaab iyo Ciidamo lasocday oo la xaqiijiyay in la dilay Meydadkoodana ay hayaan Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada
Wararka ka imaanaya Degmada Qoryooley ee Gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in xalay Weerar qorsheesan ay duleedka Degmadaasi ku qaadeen Ciidamo katirsan Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ku dileen Sargaal sare oo katirsanaa Al-Shabaab iyo qaar kamid ah ilaaladiisa.
Maleeshiyaadka Shabaab ayaa la sheegay in ay Tababar u furtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga soo tarxiilay Dalka Kenya
Wararka laga helaayo goobaha ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab ayaa la sheegay in xeryo gaar ah ay Ciidamada ku tababarto ay geesay dhalinyaro la sheegay in dhawaan Dalka Kenya laga soo tarxiilay kadib markii lagu qabtay raafkii ay sameenayeen Ciidamada Kenya.
Garabyo ka tirsan Al-Shabaab oo ku dagaallamay Saakow
Labo ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ku dhimatay isku dhac galabta ka dhacay degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe.
Al-Shabaab oo u hanjabay Gudoomiyeyaashii degmooyinka Gobolka Banaadir ee xilalka laga qaaday
Al-Shabaab ayaa ku hanjabtay inay beegsanayaan Gudoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir ee xilalka laga qaaday, kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay dhib badan u geysteen shacabka.
Al-Shabaab oo sheegay inay wali go'doomin ku hayaan degmada Ceelbuur iyo dagaalo ka dhacay
Sagal Radio Services • News Report • April 29, 2014
Al-Shabaab ayaa sheegay inay wali go'doomin ku hayaan degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud, halkaasoo bishii hore ay la wareegeen Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee Itoobiya ka socda.
Al-Shabaab oo sheegtay in gaadiid dagaal ay ku qabsadeen deegaanka Fiidow ee G/Sh/Dhexe
Al-Shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaal shalay ka dhacay deegaanka Fiidow ee Gobolka Shabeelaha Dhexe oo ku dhow xadka Gobolka Hiiraan, markii ciidamo ka tirsan kuwa Milateriga oo kolonyo ahaa dhexda u galeen.
Sheekh Cali Dheere oo ka hadlay sababta ay u beegsanayaan Xildhibaanada
Sagal Radio Services • News Report • April 23, 2014
Iyadoo laba maalin oo isku xigta lagu dilay Muqdisho laba xildhibaan oo ka tirsanaa golaha baarlamaanka Soomaaliya ayna mas’uuliyadda dilkooda sheegatay Al-shabaab ayuu afhayeenka Al-shabaab wuxuu ka warbixiyay sababta ay u beegsanayaan xildhibaannada.
Ururka Alshabaab oo guulo ka sheegtay dagaal ka dhacay gobolka Bakool
Sagal Radio Services • News Report • April 14, 2014
Ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay guulo ka sheegteen dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan gobalka Bakool oo dagaal xoogan uu ka dhacay.
-Shabaab oo Shaacisay in uu gacanta usoo galay Hub badan ay lahaayeen Ciidamada Itoobiya
Sagal Radio Services • News Report • April 13, 2014
Xarakada Al-Shabaab ayaa shaacisay in gacantooda uu soo galay hub badan ay lahaayeen Ciidamada Itoobiya ee dhawaan ku biiray Howlgalka AMISOM, kuwaa oo dhawaan guluf colaadeed ku qaaday Gobolka Galgaduud gaar ahaan Degmada Ceel Buur.
Ururka Alshabaab oo weeraray fariisimo ciidamada AMISOM ku leeyihiin degmada Mahaday
Wararka ka imanaya degmada Mahaday ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in xalay uu dagaal xoog leh ka dhacay degmadaasi kadib markii ay ciidamo taabacsan Alshabaab ay saqdii dhexe weerar ku soo qaadeen.
Amiir ka tirsanaa ururka Alshabaab oo isu dhiibay dowlada Soomaaliya codsadayna cafis
Sagal Radio Services • News Report • April 5, 2014
Isaaq Maxamed Iidor oo ka mid ahaa amiirada ururka Alshabaab oo isu soo dhiibay ciidamada dowlada toddobaadkii la soo dhaafay ayaa ka codsaday shacabka Soomaaliyeed in la cafiyo.
Al-Shabaab oo ka dalbaday beelaha ku dhaqan Shabeelaha Hoose in dagaalada kala qeyb qaataan
Sagal Radio Services • News Report • April 4, 2014
Al-Shabaab ayaa ka codsaday beelaha ku dhaqan Gobolka Shabeelaha Hoose inay kala qeyb qaatana dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda iyo AMISOM oo maalmihii u dambeeyay la wareegay deegaano ka tirsan Gobolka.
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo galay Buuraha Gal-gala iyo Puntland oo heegan gelisay ciidankeeda
Maamulka Puntland ayaa heegan geliyay ciidamada daraawiishta, kadib markii laga war helay warar sheegaya in dagaalyahano fara badan ka tirsan Shabaab, kana soo firxaday dagaalada ka socda Gobolada Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya ay galeen Buuraha Gal-gala, halkaasoo saldhig u ah Shabaabka ka dagaalamaya Puntland.
Sagal Radio Services • News Report • March 29, 2014
Al-Shabaab oo lumisay magaaladii sagaalaad, Maxaas ayaa laga qabsaday
Sagal Radio Services • News Report • March 25, 2014
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa Midowga Afrika ayaa Isniintii shalay ka qabsaday kooxda Al-Shabaab gacan ku haynta magaalada Maxaas oo 105 km dhinaca bari kaga beegan degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda
Al-Shabaab oo sheegtay Nin Soomaali Norwegian oo ka mid ahaa ragii fuliyay weerarkii Buulo Burde
Al-Shabaab ayaa baahisay nin Soomaali Norway ahaa uu ka mid ahaa kooxihii fuliyay weerarkii habeen hore lagu qaaday degmada Buulo Burde.
Afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere oo ka hadlay Dilkii loo geestay Col. Jaamac Siciid Warsame
Sagal Radio Services • News Report • March 18, 2014
Afhayeenka Guud ee Xarakada Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa ka hadlay Weerar Qorsheesan oo maalintii shalay Dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ku dileen Taliyihii Ciidanka Daraawiishta Aaga Galgala ee Maamulka Puntiland Col. Jaamac Siciid Warsame (Afguduud).
Al-shabaab oo sheegatay Ismiidaamin lagu Weeraray Gaadiidka AMISOM
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay inay mas’uul ka ahayd weerar ismiidaamin ah oo kolonyo gaadiidka AMISOM ka tirsan lagula beegsaday inta u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye gellinkii dambe ee shalay oo Isniin ahayd.
Dhalinyaro qirtay in Al-Shabaab yihiin iyo Hub ay wateen oo Muqdisho lagu soo bandhigay
Taliska Nabad Sugida Gobolka Banaadir ayaa Magaalada Muqdisho Howlgalo balaaran ay kasameeyeen waxa ay kusoo qabteen Dhalinyaro la sheegay in ay katirsan yihiin Xarakada Al-Shabaab iyo Hub ay isticmaalayeen.
Wasiiro katirsan Xukuumada Somalia oo maanta kusii jeeda mid kamid ah Degmooyinkii dhawaan Al-Shabaab laga saaray
Waxaa Maanta lagu wadaa in Degmada Xudur ee Dhawaan la wareegeen Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM in ay gaaraan Wafdi Wasiiro ah oo katirsan Xukuumada Federaalka Soomaaliya .
Afhayeenka howl-galada Shabaab C/casii Abuu Muscab yaa sheegay in ay Amisom qasaare ka soo gaartay duulaanka Hiiraan
Afhayeenka howl galada Al-Shabaab Sheekh C/casii Abuu Muscab ayaa ka hadlay dagaal ka dhacay degmada Buulo Burde, halkaasoo maalinimadii khamiistii la wareegeen ciidamada wada jirka ah.
Dagaal yahoo ka tirsanaa shabaab oo la in lagu dilay Duqeymo
Sagal Radio Services • News Report • March 12, 2014
Maamulka gobolka Gedo ee Somalia ayaa u sheegay warbaahinta in 32-dagaalyahan oo Al-shabaab ka tirsan lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ay Kenyan u geystay saldhigay ay Al-shabaab ku lahayd gobolkaas.
Al-shabaab oo xalay weerartay degmada Baydhabo ee gobolka Bay
Kooxda Al-shabaab ayaa saqdii dhexe ee xalay weerar kusoo qaaday degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo dagaalka uu ka dhacay dhowr goobood oo kala duwan.
Kooxa shabaab ayaa ka hadashay goobihii ay lumiyeen ee gobalada Bay Bakool iyo Gado
Sagal Radio Services • News Report • March 11, 2014
Afhayeenka Dhinaca howlgalada ururka Al shabaab Sh Cabdi Casiis Abuu Muscab war uu siiyey Warbahinta Afka Al Shabab Ku Hadasha Waxa uu Ka Hadalay Dagaalo al Shabab iyo ciidmada dowada oo is garabsanya kuwa AMISOM ku dhex maray Gobolda Gedo iyo Bakool Kuwasi oo Degaano looga Qabsaday Al Shabab.
Kooxda shabaab oo dagmada kali ee ay ka joogaan Gobalka Gado ka wada dhaq-dhaqaayo Ciidan
Sagal Radio Services • News Report • March 10, 2014
Sida ay sheegayaan wararka aan ka heleeyno Magaalada Baardheere ee Gobalka Gedo, ayaa waxa ay sheegayaan in ay halkaasi shabaabka had aka wadaa dhaq-dhaqaayo ciidan kuwaasi oo ay ku damac san yihiin in ay ku difahaan magaalada kali ee hada kaga hartay gacantooda Gobalkaasi Gado
Afhayeenka guud ee Al-Shabaab Cali Dheere oo Baaq u diray shacabka Soomaaliyeed.
Sagal Radio Services • News Report • March 6, 2014
Afhayeenka Guud ee Xarakada Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere oo ayaa baaq guud u diray shacabka Soomaaliyeed, kadib markii fariin cod ah oo soconeysay ilaa 20-daqiiqo uu soo diray, kaasoo uu kaga hadlayay xaaladaha dalka, gaar ahaan duulaanka Ciidamada Itoobiya.
Al-shabaab oo ku Hanjabtay inay Weerarayso Xarumaha Dowladda
Dagaal yahanada Al-shabaab ee Somalia ayaa ku goodisay in ay beegsan doonto xarumaha dowladda, iyagoo shacabka ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo xarumahooda.
Al-shabaab oo sheegtay weerarkii manta lagu qaaday goob ay dadka isugu yimadaan
Qaraxii manta ka dhacay Muqdisho oo ay ku geeriyoodeen dad ka badan 10 ruun ayaa waxa musuuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab eek a dagaalanta Soomaaliya.
Al-Shabaab oo ka warbixiyay qorshaha iyo ujeedka ay ka lahaayeen weerarkii Madaxtooyada
Sagal Radio Services • News Report • February 22, 2014
Afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere ayaa ka warbixiyay weerarkii shalay ay ku qaadeen xarunta Madaxtooyada ee Villa Somalia, isagoo sheegay in ujeedkii laga lahaa weerarkaas la gaaray.
Al-Shabaab oo sheegtay in ay dileen Ciidan ka tirsan kuwa Itoobiya sheegayna in ay kuwa kale dhaawaceen
Xarakada AL-Shabaab ayaa sheegtay in ay dileen Ciidamo Itoobiyaan ah oo katirsan Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM kadib qarax miino oo lala eegtay gaadiid ay wateen Ciidankaasi.
Al-Shabaab oo ku hanjabay inay beegsan doonaan Mas'uuliyiin dalka ku soo hogaamisay AMISOM
Sagal Radio Services • News Report • February 19, 2014
Xarakada Al-Shabaab ayaa ku hanjabtay inay beegsan doonaan mas'uuliyiin dalka ku soo hogaamisay Ciidamada shisheeye ee ka socda AMISOM, kuwaasoo xusay inay liis ugu qoran yihiin.
Al-Shabaab oo sheegatay dilkii Sarkaalkii ugu sareeyay dhinaca amaanka Maamulka Juba
Sagal Radio Services • News Report • February 18, 2014
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyada dilkii xalay magaalada Kismaayo loogu geystay Taliyihii Nabadsugida Maamulka KMG ah ee Juba Ciise Kaambooni, iyadoo xaalad kacsanaan ah ay ka jirto magaalada, kadib howl gal dad lagu dilay oo ka dhacay.
Ciidamadii Milatariga ee la ruqseeyay oo la sheegay in qaarkood Shabaab ku biireen halka kuwa kalana ay Tuugnimo bilaabeen
Gaashaanle dhexe Geelle Faarax oo kamid ahaa Saraakiishii Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ee dhawaan shaqada laga fariisiyay ayaa sheegay in qaar kamid ah Ciidamadii dhawaan la ruqseeyay in ay ku biireen Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qaraxii Muqdisho
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qarax gaari oo maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Al Shabaab oo ku dhawaad 20 ruux ku xiray degmada Xarar dheere
Sagal Radio Services • News Report • February 11, 2014
Sida ay sheegayaan warar aan ka helayno degmada Xarar dheere ee gobolka Mudug ayaa waxa ciidamo katirsan Al Shabaab ay xabsiga utaxaabeen ku dhawaad 20 qof oo dadka deegaankaasi ahaa.
Horjoogayaasha Iyo Malleeshiyaadka Shabaab Oo Laga Mamnuucay Isticmaalka Talefonnada Smart Phones-ka
Waxaa sii kordhaya welwelka iyo baqdijnta soo wajahday Maleeshiyaadka Shabaab, iyadoo horjoogaha ugu sareeya kooxda uu amar ku siiyay horjoogayaasha iyo maleeshiyadka in ay joojiyaan isticmaalka Telphonnada loo yaqaano Smart Phoneska iyo aalado kale.
Cali Dheere "Wasiiradan cusub ee Yurub iyo Mareykanka laga keenay waa ka doqonsan yihiin kuwii hore"
Sagal Radio Services • News Report • January 25, 2014
Afhayeenka guud ee Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa is bar bar dhig ku sameeyay Xukuumadihii hore iy Xukuumadan cusub, isagoo soo hadal qaaday tallaabadii Ciidamada Itoobiya loogu biiriyay howl galka AMISOM.
Mudadii Al-Shabaab u qabatay in lagu joojiyo Adeega Internetka oo saddex cisho ka harsan
Mudadii Xarakada Al-Shabaab u qabatay Shirkadaha Isgaarsiinta inay ku joojiyaan isticmaalka Adeega Internet-ka ee Fibre Optic iyo Internet Mobile ayaa waxaa ka harsan saddex maalmood, iyadoo aanay jirin wax war ah oo ka soo baxay Shirkadaha.
Magacyada Ajaanib Ku Geeriyootay Duqeyn Dhawaan Ka Dhacday Gobolka Gedo Oo La Soo Bandhigay
Dowladda Kenya ayaa soo dhandhigtay magacyada horjoogayaal ajaanib ah oo ku geeriyoodey duqeyntii diyaaradaheeda ay dhowaan ka fuliyeen deegaanno katirsan Gobolka Gedo.
Sagal Radio Services • News Report • January 14, 2014
Xarakada Al-shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ayaa shacabka Muqdisho uga digtay inay u dhawaadaan xarumaha dowladda iyo kuwa hay’aduhu ay daggan yihiin. Iyadoo sidoo kale Muqdisho lagu afduubay laba ruux Kenyan ah.
Al-shabaab Oo Soo Saartay Bayaan Lagu Joojiyay adeegga Mobile Internet-ka
Idaacadda Al-Andalus Page-keeda Facebook-ga ayaa lagu baahiyay bayaan kasoo baxay Shabaab oo dalka looga mamnuucay adeegga Mobile Internet iyo Fiber Optic oo dhawaan dalka Soomaaliya laga hirgeliyay.
Al-shabaab oo sheegtay Mas’uuliyada qaraxyadii xalay ee Muqdisho Mar kalana ku celiyay in shacabku ay ka fogaadaan goobaha Ciidamada DF iyo Dhinacyada caawiya
Sarkaalka Al-shabaab ugu magacaaban Gobokaan Banaadir l Sheikh Ali Hussein, oo loo yaqaano Abu Jabal, ayaa sheegay inay dagaalyahanadooda ka danbeeyaan weeraradii xalay ka dhacay Hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Xarakada Al-shabaab oo shacabka Muqdisho ugu baaqday inay ka fogaadaan Saldhigyada Ciidamada iyo Xarumaha Dowladda
Al-shabaab ayaa shacabka Muqdisho ugu baaqday inay ka fogaadaan saldhiyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin Muqdisho iyo weliba xarumaha dowladda, iyagoo sheegtay inay goobahaas yihiin kuwa ay mar walba beegsanayaan.
Al Shabaab oo la sheegay inay lacago baad ah ka qaataan hay’adaha gar gaarka
Xarakada Al-shabab ayaa la ogaaday in lacago baad ah ay ka qaaden hay,adaha bixiya gar gaarka Bini aadanimo si ay hay,adahaasi gar gaarkooda u gaarsiyaan deganada Al-shabab ay maamulaan tan iyo sanadii 2011-kii oo abaaro xoogan ay ku dhuften gobolada Konfured waa sida lagu sheegay warbixin ay soo saaren laba hay,adood oo qaabilsan Fikirada iyo Raiyada.
Maleeshiyada Al Shabaab oo Ka Hadashay Geerida ku timid Nelson Mandela
Sagal Radio Services • News Report • December 8, 2013
Sheekh Aadan Sunna, oo taageera Ururka Al SHabaab ayaa ka hadlay, Taariikhda dheer ee Nelson Mandela oo dhawaan geeriyooday.
Maleeshiyaad ka mid ahaa shabaab oo saakay lagu dilay duleedka B/weyn xili ay halkasi howl-gal ka sameeyeen Ciidamada is garabsanaayo ee Dowlada iyo AMISOM
Lix ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa saakay lagu dilay duleedka degmada Beledweyne kadib markii ay ciidamada dowlada Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah AMISOM ay howgal ka fuliyeen tuulooyin ku yaala galbeedka magaalada Beledweyne.
Sheekh Cali Dheere oo Dadka Buulo Burde Hadal Qancis ah u sheegay
Sagal Radio Services • News Report • November 24, 2013
Afhayeenka Guud ee Xarakada Al Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Cali Dheere ayaa u faanay dadka Buulo Burdo iyo dhaaman Shacabka Soomaaliyeed, isaga sheegay in guushooda ay goordhaw soo dhawdahay.
MADAXWEYNE GEELLE: “Al-shabaab Waxay ku Jirtaa Maalmihii Nolosheeda ugu dambeysay, Wayna dhiman doonaan”
Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in Al-shabaab ay marayaan maalmihii ugu dambbeysay ee noloshooda ayna dhawaan dhiman doonaan, waxaana uu hadalkan sheegay mar uu ka hadlayay weerar askari Jabuutiyaan ah uu ku dhintay dhowr kelna ay kalena ay ku dhaawacmeen oo maalin ka hor ka dhacay magaalada Baladweyne.
Al-shabaab oo gubtay gaari waday dhalooyin Qamri ah, kuna hanjabtay...
Wararka laga helayso degmada Diinsoor ee gobalka Bay ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay gudaha degmadaasi ku gubeen baabuur noociisa lagu sheegay inuu yahay Qooqan, kaas oo waday sida ay Al-shabaab sheegeen waxyaabaha maanta dooriya.
Maleeshiyaadka Shabaab oo tacadiya hor leh ku haya shacabka ku dhaqan meelaha ay wali ka taliyaan xili ay diideen in wax subac ah laga qaado Dugsiyada Qur,aanka
Malleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa sii xoojiyey cadaadiska ay ku hayaan dadka rayidka ah ee ku sugan deegaannada kooban ee ay ugu sugan yihiin gobolka Shabeellada Dhexe, iyagoo si gaar ah u billaabay in ay joojiyaan Isticmaalka Taleefannada gacanta iyo sidoo kale akhrinta Qur’aanka Kariimka ah gaar ahaan Subaca.
Somali Links Allsomalimusic.com Contact Us Photo Gallery Search BBC Somali - VOA BBC Somali 07:00 BBC Somali 11:00 BBC Somali 14:00 BBC Somali 18:00 VOA Somali 06:30 VOA Somali 16:00 VOA Somali 20:00 Al-Shabaab oo dib ula wareegtay Jaziirada Kudhaa ee Gobolka Jubada Hoose
Xoogaga Al-Shabaab ayaa dib ula wareegtay Jaziirada Kudhaa ee Gobolka Jubada Hoose, halkaasoo maalmo ka hor ay la wareegeen Ciidamada Maamulka KMG ah ee Jubba iyo Ciidamada Kenya ee ka midka ah AMISOM.
Shabaab oo digniin u dirtay malkiilayaasha Hoteelada Muqdisho shegayna in ay weerarayaan hadii laga kireeyo Ajnabi iyo Dowladaba.
Afhayeenka Howl galada Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa ku wargeliyay Milkiilayaasha Hotelada inay ka fogaadaan saraakiisha dowladda iyo mas'uuliyiintaa, isla markaana hantidooda ay ka dheereystaan.
(Dhageeyso): Al-Shabaab oo sheegay in Madax weyne Xasan Sh ay halis galiyeen
Sagal Radio Services • Audio/News Report • November 1, 2013
Afhayeenka Dhanka howlgalka u qaabilsan Xarakada Al-shabaab C/casiis Abuu Muscab ayaa sheegay in Weerar shalay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Kismayo ay ku qaadeen uu Faracidiyaleh uu ku fikaday Madax weynaha Soomaalia Xasan sh Maxamuud.
Dhageyso shabaab oo sheegay in ay sigeen M/weeynaha Soomaaliya
Cali Dheere "Ciidanka uu leeyahay Ban Ki-moon hala soo kordhinayo waxay bedel u yihiin kuwii baaba'ay"
Sagal Radio Services • News Report • October 31, 2013
Afhayeenka guud ee Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa ka hadlay ciidamada dheeraadka ah ee lagu kordhinayo ciidanka AMISOM ee Soomaaliya, isagoo sheegay in ciidankaas aanay waxba soo kordhin doono.
Al-Shabaab oo dhoolatus milateri oo ku socda Kenya ku soo bandhigay Buulo Burde.
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa dhoolatus milateri ku soo bandhigay degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan, iyadoo dhoolatuskan ay ka qeyb qaateen gaadiid dagaal iyo mootooyin.
Al-shabaab"Nairobi waxay ku dhowaatay inay ka mid noqoto Wilaayaadka Islaamiga
Sagal Radio Services • News Report • October 16, 2013
Sheekh Cali Dheere Afhayeenka guud ee Al-Shabaab oo shalay salaadii ciida kadib boqolaal qof kula hadlay degmada Baraawe ayaa sheegay in magaalada Nairobi ay ku dhawaaqat inay ka mid noqoto wilaayaadka Islaamiga ah ee ay ka taliyaan.
Al-Shabaab ayaa waxa ay markale hanjabaad hawada u mariyeen wadamada Uganda iyo Kenya oo ay Ciidama ka joogaan Soomaaliya.
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa mar kale ku hanjabtay inay weeraro ka geysaneyso dalalka Uganda iyo Kenya oo horay weeraro ugu qaaday.
Al-shabaab oo ka warbixisay weerar lala beegsaday Guri ku yaalla Dgemada Baraawe ee Gobolka Shabeellada Hoose
Xarakada Al-shabaab ayaa ka hadashay weerar ay ciidammo ajnabi ah ku qaadeen xalay gellinkii dambe guri ku yaalla degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose.
Sarkaal Ka Tirsan Shabaab Oo Lagu Dhaawacay Bosaaso
Sagal Radio Services • News Report • June 4, 2013
Sarkaalka tirsan maleeshiyad argagixisada ah ee kooxda shabaab ayaa galabta lagu dhaawacay magaalada Bosaaso kadib markii uu isku dayay in uu ka baxsado ciidamada amaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland.